Fiarahan’ny TIM sy Mapar : Tezitra ny AV7 -
AccueilRaharaham-pirenenaFiarahan’ny TIM sy Mapar : Tezitra ny AV7
Tsy takona hafenina intsony fa dia nifampitantana ny antoko Tim sy ny Mapar hiara-hanohitra izao fitondrana izao. Tranga tsy noeritreretin’ny maro mihitsy ity fiarahana ity, saingy noho ny fitiavan-tseza tafahoatra dia tanteraka ihany. Tezitra noho izany ireo mpikambana sasany ao amin’ny AV7, izay natao sorona teny Ambohitsorohitra ny 7 febroary 2009, nandritra ny ady seza nataon’i Andry Rajoelina sy Ravalomanana. “Tsy nampoizina ho tonga amin’izao ny toe-draharaha izao, raha tsy izany dia i Rajoelina irery no nalefanay niakatra teny Ambohitsorohitra, dia tsy nitondra takaitra sy namoy havana izahay” hoy ireo mpikambana sasany ao anatin’ny AV7. “Aminay mantsy dia i Marc Ravalomanana no nampitifitra ka nahatoy izao anay, tsy azon’ny saina eritreretina noho izany ny hisian’ny fifampiraharahana aminy” hoy hatrany ny fanazavan’ireto mpikambana ireto. Tezitra amin- dRajoelina araka izany ny mpikambana ao anatin’ny AV7, noho izao fiarahany amin’ny Ravalomanana Marc izao. Ity farany izay efa nomelohin’izy ireo satria nampitondra takaitra mandra-maty azy ireo.
Noho ny fitiavan-tseza tafahoatra, dia lasa niara-dia ny antoko TIM sy Mapar. Asa na hadinoin’izy ireo fa nisy tantara tsy azo kosehina eto amin’ny firenena no antony nahatonga iny fisarahana iny. Very tanteraka araka izany ny fitokisana nomen’ireto mpikambana AV7 an’i Andry Rajoelina noho iny tranga hafahafa iny. Raha tsiahivina dia efa nambaran’ireo mpanao politika sasany izao fiarahan’ireto mpifahavalo ara-politika ireto izao, saingy nijanona ho fanehoan-kevitra ihany izany tamin’ny fotoana nanambarana azy. Tsy nampino ireo olona mpanara-dia ny roa tonta ihany koa. Maro noho izany no diso fanantenana taorian’ireny fiarahana ireny, ka nanapa-kevitra ny tsy hiara-dia amin’izy ireo intsony. Tsy ny AV7 ihany araka izany no naneho ny tsy fankasitrahany ity fiarahan’ny mpifahavalo ara-politika ity, fa na ireo mpanara-dia azy aza dia tsy faly ihany koa. Efa tongotra mby an-dakana anefa ny an-dRajoelina sy Ravalomanana ny amin’ity fiarahana ity, ka na naneho ny tsy fankasitrahany aza ireo mpomba azy ireo dia tsy maintsy tratra ny tanjona, dia ny fahazoana seza sy ny fizarana izany hiaraha-mihinana.